သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ ၃ အမှတ် ၂ အတွက် စာမူများ ပေးပို့နိုင်
Home သံလွင်ရေးရာများ သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ ၃ အမှတ် ၂ အတွက် စာမူများ ပေးပို့နိုင်
Menu	HomeGuestbookToday in HistoryNews & Blog FeedsContact Us	သံလွင်အိပ်မက် [Latest]	မျက်နှာဖုံးနှင့် အမှာစာမာတိကာစာဖတ်သူတို့ပေးစာများကဗျာများကာတွန်းများဟာသဆောင်းပါးများအက်ဆေးများဝတ္ထုတိုများပေးစာအင်တာဗျူးစာအုပ်စင်သို့ ကိုသံလွင်ဗေဒင်	သံလွင်အိပ်မက်အဟောင်းများ	အတွဲ(၄) အမှတ်(၁)အတွဲ(၃) အမှတ်(၄)အတွဲ(၃) အမှတ်(၃) (အထူးထုတ်)အတွဲ(၃) အမှတ်(၂)အတွဲ(၃) အမှတ်(၁)အတွဲ(၂) အမှတ်(၃)အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)အတွဲ(၂) အမှတ်(၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၁)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၀)အတွဲ(၁) အမှတ်(၉)အတွဲ(၁) အမှတ်(၈)အတွဲ(၁) အမှတ်(၇)အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)အတွဲ(၁) အမှတ်(၅)အတွဲ(၁) အမှတ်(၄)အတွဲ(၁) အမှတ်(၃)အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)အတွဲ(၁) အမှတ်(၁)	ယနေ့5မနေ့က1654တစ်ပတ်အတွင်း9658ယခင်သတင်းပတ်က11734တစ်လအတွင်း41176ယခင်လက72912စုစုပေါင်း2891583Visitors Counter	Join us in Facebook Facebook Fanbox 1.5.x.0	သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ ၃ အမှတ် ၂ အတွက် စာမူများ ပေးပို့နိုင်	Views : 3646 Favoured : 168
Shareသံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၃ အမှတ် ၂ ကို မကြာခင် ဝေေ၀ဆာဆာ ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိရာ စာမူပေးပို့လိုသူများ အနေဖြင့် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ သံလွင်အိပ်မက်တွင် ပုံမှန် ပါဝင်နေကြကဏ္ဍများဖြစ်သည့် ၀တ္ထု၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးနှင့် အက်ဆေးစသည်တို့အတွက် စာမူအချို့လက်ခံရရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ စာမူများနှင့် ဓာတ်ပုံများကို ဆက်လက်၍ ပေးပို့လိုသူများ အနေဖြင့် စာမူ လက်ခံသည့် နောက်ဆုံးနေ့ မတိုင်မီ editor@thanlwin.com သို့ ပေးပို့နိုင်ကြောင်းနှင့် ယခင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် အတွဲ ၃ အမှတ် ၁ တွင် “ပညာရေး” ကို အထူး အသားပေးခဲ့သလို ယခု ထုတ်ဝေမည့် သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်းတွင် “အခွင့်အလမ်း” ကို အသားပေးထားသည့် ကဏ္ဍများ ပါဝင်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သံလွင်အိပ်မက် ၀ိုင်းတော်သား တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုစည်သူ (သံလွင်) က ပြောဆိုသည်။ ထို့ပြင် သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ ၃ အမှတ် ၁ တွင် လူကြိုက်များခဲ့သည့် စာရေးသူ မျိုးချစ်မေ၏ “လုပ်ရပ်၊ စိတ်ကူး၊ စေတနာ” ဟု အမည်ပေးထားသည့် ရေနံကုမ္ပဏီ တစ်ခုတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဆောင်းပါး အကြောင်းကိုလည်း အတွဲ ၃ အမှတ် ၂ တွင် ဖတ်ရှုရမည် ဖြစ်သည်ဟု သံလွင်အိပ်မက် ၀ိုင်းတော်သား တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုအေးချမ်း(သံလွင်)က ဖြည့်စွက် ပြောဆိုသည်။ ဆက်လက်၍ သံလွင်အိပ်မက် ၀ိုင်းတော်သားဖြစ်သည့် ကိုငယ် (မန္တလေး) က အင်တာဗျူးများကိုလည်း ယခင်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စီစဉ်ထားကြောင်းနှင့် စာမူများ ပေးပို့ရာတွင် ကွန်ပျူတာဖြင့် မြန်မာလက်ကွက်ကို မရိုက်တတ်သူများမှ လွဲ၍ ကျန်သူများ အနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါက ဇော်ဂျီ ယူနီကုတ်စာလုံးကို အသုံးပြု၍ ပေးပို့စေလိုကြောင်း ပြောဆိုသည်။ (သံလွင်သတင်း)	Users' Comments Average user rating
Display2of2comments	1. 27-03-2009 18:54
င်းရေ.. မနက်က အိပ်ငိုက်င
ရး မိတာဗျာ။ ခုလို တကူးတကလာ သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါပ
ဲ။ ကျွန်တော် နာမည်အမှား
ကို ခုပဲ ပြင်လိုက်ပ
ါပြီ။ စာရေးသူ မျိုးချစ်ေ
အတွက် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ေ
ကြာင်း တခါတည်း ပြောပါရစေ။
ညီညီ(သံလွင်)	2. 27-03-2009 17:19
အတွဲ (၃)အမှတ် (၁)မှာ ပြည်ချစ်မေ
ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ခြေဆုံးခေါ
တာ မတွေ့ဘူး။ မျိုးချစ်ေ
မပဲ တွေ့တယ် သူတို့က အမွှာတွေလား မသိဘူး.. Guest
နိုင်းနိုင်းစနေ	Display2of2comments
Add your commentmXcomment 1.0.8 © 2007-2013 - visualclinic.frLicense Creative Commons - Some rights reserved	သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ ၃ အမှတ် ၂ အတွက် စာမူများ ပေးပို့နိုင်	Friday, 27 March 2009 10:39	Currently 1.60/5 12345 Rating 1.6/5 (30 votes) < Prev